Apple inopa mavhidhiyo maviri ane chaiyo nyaya dzevanhu vakaponesa hupenyu hwavo nekuda kweApple Watch | Ndinobva mac
MaWatchwatches mune zvese, zvishoma nezvishoma ave chishandiso chiri kuramba chichijairika kuona pamaoko evanhu. Kure nekuve chishandiso che geeks, Rudzi rwechigadzirwa harungotibvumire chete kuyera chiitiko chedu chemuviri, asi zvakare chinotibvumidza kuti tione kuwanda kwemoyo wedu.
Mupfungwa iyi, iyo Apple Watch ndiyo yega chishandiso icho zvakare, ndiye anoona nezve kuongorora moyo yedu kurova kwemoyo, kutizivisa kana iwe ukawana chero chisina kujairika panguva yako yekuyera. Kutenda kuApple Watch, kwave kuine vanhu vazhinji vasina kungoponesa hupenyu hwavo chete, asi vakawanikwawo vaine chirwere chavaisaziva kuve nacho.
Apple yakatumira mavhidhiyo matsva maviri pane yayo YouTube chiteshi, inonzi Nhoroondo chaiyo, kwatinogona kuona vamwe vevanhu chaivo, vanovonga Apple Watch ndakakwanisa kuponesa hupenyu kana kuona chirwere kutanga.
Aya mavhidhiyo anobudiswa zuva rimwe mushure mekuburitswa kwewatchOS 5.1.2, vhezheni yeApple Watch inoshanda sisitimu iyo inobatsira iyo ECG basa kuita maelectrocardiograms kubva pachiuno chedu, basa rakachengetwa naApple gumira kubasa chete muUnited Statessezvo iri yega nyika yakawana mvumo inodiwa kuburikidza neCCC.
Nyaya yekutanga inotiratidza murume wechidiki anonzi Michael Jackson, uyo anoita jee nezvezita rake, uye anotambura nespastic tetraplegic cerebral palsy. Rimwe zuva, akagamuchira zviziviso pane yake Apple Watch izvo kurova kwemwoyo wako kwanga kwakanyanya panguva yekuzorora. Michael akaenda kuER uye akawanikwa aine sepsis.
Yechipiri, yakareba, maminitsi mana nehafu kureba, inowanzo shambadziro yeApple Watch, ine humbowo kubva kuvanhu vana vakakwanisa chengetedza hupenyu hwavo nekutenda kuApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inopa mavhidhiyo maviri ane chaiyo nyaya dzevanhu vakaponesa hupenyu hwavo nekuda kweApple Watch
Zita raRichard Gere rinonzwika kugadzirwa kunotevera kwaApple
Neichi chishandiso unogona kuvhura winmail.dat mafaera pane iyo Mac